UIstván Sándorfi kunye nepeyinti yakhe ekhethekileyo yeoyile | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Kukho amagcisa anomgangatho wobugcisa obalaseleyo kunye nesandla esikhethekileyo sokuthatha ithuba kunzima kangakanani ubuchule beoyile ukuze ukwazi ukubonisa izimvo ezithile ezothusayo. Phakathi kwaba bazobi kukho abanye abangafaniyo phakathi kwezona zidumileyo, kodwa oku akuthethi ukuba masingabacingeli, njengoko kusenzeka ku-István Sándorfi.
Umzobi one Umsebenzi omkhulu weoyile kwaye kwibrashi nganye unokufumana umgca oqinisekileyo kunye noqinileyo wokumela imisebenzi eyiyo efana nale isichaphazelayo kule mvakwemini yemvula kunye namafu angwevu atshabalalisa iimvakalelo zethu. USandorfi udlala ngokukhupha amalungu athile omzimba womntu njengoko kusenzeka kumfanekiso wentloko womgangatho obalaseleyo.
Umsebenzi omhle owenza oku Umzobi waseHungary owayehlala ixesha elininzi lobomi bakhe eFrance wasishiya ngo 2007. Umzobi ngezinto zakhe kunye nokuxubana nezinto njengoko kuchaziwe kwibhayiloji yakhe apho abonisa khona ukuba iminyaka emininzi wayezibonakalisa njengobukho babanye obabumkhathaza ngelixa wayesenza imisebenzi yakhe. . Asizukuthetha nto malunga nokuba ngabaphi abaculi abakhethekileyo.
Ukususela ngo-1988 waqalisa peyinta kuphela amanani ababhinqileyo isongelwe ngamashiti kwaye ngamanye amaxesha abeka ecaleni kwezinto ezinqabileyo. Umzobi owayecinga ukuba uzifundisile, nangona wayedlule kumaziko amabini awaziwayo. Abagxeki bezobugcisa babeke uSándorfi phakathi kwamagcisa anyanisekileyo, okwenzekayo ukuba akazange azicinge njengomnye, kuba, kwimisebenzi yakhe, nangona babenobunkunkqele kakhulu, bekusoloko kukho iziphene zangabom, njengoko sibona kwimisebenzi yentloko.
Un umzobi omkhulu ukuba size nale migca ukufumanisa eminye yemisebenzi yakhe emihle kwi-hyperrealism kunye nonyango olumnandi lwe-muses yakhe, ngakumbi enye yeentombi zakhe.
Ioli ye enye ukuzifundisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ipeyinti yeoyile kaIstván Sándorfi